Dhisidda iyo dayactirka shaqooyinka | Ayuub iyo shaqo khayraadka ka USAHello | USAHello
Baro warshadaha dhismaha iyo noocyada kala duwan ee shaqooyinka dhismaha iyo dayactirka. Read ku saabsan waddooyinka mustaqbalkiisa kala duwan oo aad qaadi karto dhismaha iyo dayactirka. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada.
Shaqaalaha shaqooyinka dhismaha iyo dayactirka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqaalaha. shaqaalaha dhismaha diyaariyaan dhulka iyo ka faa'iideysiga mashiinada si ay u sameeyaan dhismayaasha, waddooyinka, iyo qaabab kale. shaqaalaha dayactirka hagaajin iyo sii wadida dhismayaasha iyo mashiinada. Baro oo dhismaha iyo dayactirka shaqooyinka waa kugu habboon.
Waa kuwee dhismaha ama shaqo dayactir?
Waxaa jira noocyo badan oo shaqooyinka dhismaha iyo dayactirka:
qasabadaha - qasabadaha rakibi khadadka sahayda biyaha oo ay saxaan marka ay jiraan dhibaatooyin. Waxa kale oo ay hagaajin qalabka ku xiran yihiin khadadka biyaha, sida alaabta dhaqa. Waxaad u baahan doontaa inaad qaadato imtixaanka si aad u hesho liisanka tuubooyinka a. Gobol kasta wuxuu leeyahay sharciyo kala duwan oo ku saabsan sida loo helo ruqsad. Read gobolka by xeerarka liisan gobolka qasabadaha.
Farsamoyaqaan Car - Farsamoyaqaan baadho iyo hagaajin baabuurta. Waxay hubin in ay jirto saliid ku filan iyo dheecaannada kale ee baabuurka dhigi. Shaqooyinka qaarkood waxay u baahan yihiin tababar farsamo baabuurta. Raadi fasalo waayo, farsamo baabuurta.
shaqaalayaal beertiisa u nijaarnimada - caawimo si ay u dhisaan iyo hagaajin dhismayaasha iyo waxyaabaha ka samaysan qori ah. Waxay qaadaan alaabta, godad qoditaanka, iyo samayn dhismaha aasaasiga ah. Qalabka nadiif ah iyo goobaha shaqada. No waxbarashada tooska ah waxaa loo baahan yahay shaqo this. Baro oo ku saabsan shaqada nijaarnimada.
Mason - wastaadyo dhiso iyo dhagxan shaqeeyaan. Way dhisi derbiyada, ardaagooda, oo la socdo. Xoorta waa shaqo xirfad leh, laakiin waxaa laga yaabaa in aad ka heli tababarka shaqada.
shaqaalaha dhismaha - diyaariyo goobo halkaas oo dhismayaasha la dhisi doonaa. Loading iyo dejinta qalabka loo isticmaali doono. Mararka qaarkood, Waxaa laga yaabaa in aad hoos u qaadato dhismayaasha in la dhiso kuwa cusub. Baro shaqooyinka dhismaha.
maamulayaasha mashruuca dhismaha - maamulayaasha dusha mashaariicda iyo kooxda dhismaha. Waxay ka shaqeeyaan on qandaraasyada, miisaaniyadda, iyo macaamiisha in ay la kulmaan waqtiyada shaqeeyaan. maamulayaasha qaarkood waxay u baahan laga yaabaa in uu shahaadada koowaad ee duurka oo kale ah maamulka dhismaha, sayniska dhismaha ama engineering rayidka ah.
ka shaqeeya Crane - wadayaasha mishiinada waaweyn wac wiish iyo inaad dhistid oo dumin dhismayaasha. Si aad u noqoto operator wiish a, aad u baahan tahay in ay qaataan fasallo iyo aad u hesho shahaado ka Guddiga Qaranka ee Certification of Crane Wadayaasha.
farsamo wiishka - hagaajin iyo sii wadida wiishashka, escalators, iyo mashiinada kale. Waxaad u baahan doontaa inaad wax ka barato oo aad yeeshaan barasho muddo shan sano ah.
koronto - rakibi iyo sii wadida nidaamka korontada ganacsiyada, guryaha, iyo warshadaha. Tani waxay noqon kartaa mid aad u adag shaqo iyo xitaa khatar ah oo u baahan laysanka. Waxaad u baahan tahay si ay u bartaan oo ku saabsan sayniska korontada. Waxaad sidoo kale u baahan tahay in ay ka shaqeeyaan sidii arday ah muddo afar sano ah. Baro sida loo noqdo koronto yaqaan.
Daawo video ah oo ku saabsan shaqada ee koronto
Ma dhismaha iyo dayactirka shaqooyinka xaq ii?
Tirada shaqooyinka dhismaha iyo dayactirka waxaa sii kordhaya. Laakiin dadka ma ku filan loo tababaray. Haddii aad ku tababaran kartaa dhismaha ama dayactirka xirfad, waxaad mar walba awood u yeelan doonaan in ay shaqo u helaan. Qiyaastii hal-quarter of dhismaha iyo dayactirka shaqo ee USA waxaa lagu qabtay by waddanka u soo guurey. Taas macnaheedu waa in hadla in ka badan hal luqad noqon kartaa xirfad muhiim ah.
shaqaalaha dayactirka Qaar ka mid ah dadka ka caawiyaan by guryahooda si ay u sameeyaan dayactir socday. Haddii aad jeclaan caawinta dadka, shaqo, kuwaas oo aad u habboon. shaqaalaha dayactirka kale u leeyihiin in ay si degdeg ah oo shaqada ka jawaabaan 24 saacadood maalintii marka xaaladaha degdegga ah u dhici. Waxaad sidoo kale u baahan kartaa in ay sameeyaan shaqada jirka adag oo camal dibadda ee meelo qabow iyo kulayl.
shaqooyinka dhismaha khatar noqon kara maxaa yeelay, waxaad laga yaabaa in la mashiinada culus shaqeeyo ama waxaa laga yaabaa in ay on dhismayaasha dhaadheer taagan. Shaqooyinka Kuwani habboon dadka jir ahaan taam ah oo degdeg ah.
Shaqooyin badan oo dhismaha iyo dayactirka, cidda aad u shaqayso aad tababari doonaan shaqada. Waxaad bilaabi kartaa shaqo raadinta isla markiiba.
Waayo, shaqooyin kale, waxaad ka heli kartaa tababar ama shahaado ee Kulliyadda bulshada. Raadi college beesha kuu dhow. Waxa kale oo aad ka heli kartaa tababarka sida arday ah. Raadi barashada la CareerOneStop.
Haddii aad haysatid shahaado technology ama shahaado ka timid waddan kale, Upwardly Global caawisaa soo galootiga shaqo-idman, qaxootiga, Entry Level, iyo dadka haysta fiisada guuleysatey shaqooyinka xirfadeed ee dalka Mareykanka.
Isticmaal xarunta shaqada ah: xarumaha shaqada dowladda waa lacag la'aan. Waxay bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Waxay kugu xidhi karaan tababarka iyo waxbarashada shaqada. Aad u ogaato xarunta shaqada ee kuugu dhow.
Raadi online: IHireConstruction waa waa website shaqo dayactir beeraha ah, dhismaha, iyo shaqo dayactir. Waxa kale oo aad eegi kartaa website-shaqo raadinta oo caan ah sida indeed.com iyo monster.com.
Isu diyaari in aad GED® la USAHello
Sidee in ay dib ugu dugsiga
Sida loo helo barnaamijyada tababarka shaqada